Fikarohana avy amin'ny TRF | Fanorenana valisoa: fitiavana, firaisana ary ny Internet
Home Momba anay Fikarohana nataon'ny TRF
Ny ekipan'ny The Reward Foundation dia mandray anjara amin'ny fikarohana miaraka amin'ireo mpiara-miasa ao Angletera sy Etazonia. Miara-miasa akaiky amin'ireo manam-pahaizana momba ny neuroscience amin'ny oniversite ambony sy amin'ny manam-pahaizana amin'ny fiankinan-doha amin'ny toeram-pitsaboana. Ity ny fikarohana voalazan'ny lahatsoratra navoakanay. Izany rehetra izany dia ao amin'ny gazetim-peo notsongaina.
Ny iray amin'ireo taratasinay Yokohama izay navoaka ankehitriny tao amin'ny diary malalaka sy zahana dinihina. Ny taratasy dia Fanovana ny «Manifesto ho an'ny tambajotra fikarohana eropeana ho fampiasana olana amin'ny Internet" miaraka amin'ireo filan'ny vondrom-piaraha-miasa amin'ny vondron'olona matihanina sy mpanjifa voakasiky ny fampiasana olana amin'ny pôrnôgrafia. Izy io dia mamaritra ny soso-kevitry ny TRF momba ny fikarohana ilaina mandritra ny folo taona ho avy. Lalina Tantara eo amin'ny taratasy no eto.
Tamin'ny Jona 2019 dia nanolotra ny TRF nandritra ny fihaonambe iraisam-pirenena faha-6 tao Yokohama, Japon. Nanolotra taratasy fiarahana roa izahay ao amin'ilay fizarana Hetsika ara-pihetseham-po sy fitondran-tena tafahoatra. Niresaka momba izany i Mary Sharpe Ny fanambin'ny mpianatra mpianatra mpianatra momba ny fikarohana momba ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena. Nanolotra i Darryl Mead Fametrahana ny Manifesto ho an'ny tambajotra fikarohana Eoropeana ho ny fampiasana ny aterineto ho sahirana amin'ny filàna maro samihafa amin'ireo vondrom-piarahamonina matihanina sy mpanjifa voakasika amin'ny fampiasana olana ara-pôrnôgrafia.
Ny bokintsika farany Pôrnôgrafia sy Firaketana Fikarohana momba ny firaisana ara-nofo ao amin'ny Kaonferansa Iraisam-pirenen'ny 5th Iraisam-pirenena momba ny Fandaniana Behoririka. Ity fihaonambe ity dia natao tao Cologne, Alemana tamin'ny Aprily 2018. Navoaka ny gazety Fanampiana ara-pananahana sy fanerena amin'ny aterineto amin'ny 18 Martsa 2019. Azontsika atao ny manome rohy mankany amin'ny dikan-teny nivoaka fangatahana. Misy dika mitovy amin'ny sora-tanana azo alaina avy amin'ny ResearchGate.
Ny tatitra nataon'ny federasiona avy any Cologne dia nanolotra ny fanolorana voalohany anay amin'ity sehatra ity. Nivoaka izany Mifampiresaka amin'ny siansa momba ny fiankinan-doha amin'ny cyber amin'ny mpihaino maro.
Ity taratasy ity dia natsangana Pôrnôgrafia sy Firaketana Fikarohana momba ny firaisana ara-nofo ao amin'ny Kaonferansa Iraisam-pirenen'ny 4th Iraisam-pirenena momba ny Fandaniana Behoririka. Navoaka tao Fanampiana ara-pananahana sy fanerena an-tserasera tamin'ny 13 septambra 2017. Hita tamin'ny pirinty tamin'ny Boky faha-24, laharana 3, 2017. Misy antsipiriany misimisy kokoa ao anatin'izany ny famerenana sy ny abstract hita ao amin'ny TRF Blog. Raha te hanana dika amin'ity lahatsoratra ity ianao dia soraty amin'ny alalanay Mifanerasera ao amin'ny faran'ity pejy ity.
Modely amin'ny Internet ary famonoan'olona
Mary Sharpe, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny The Reward Foundation, dia niara-nanoratra toko tamin'i Steve Davies avy amin'ny Lucy Faithfull Foundation. Nantsoina hoe "Ny maodely fandosiran'ny Internet sy ny fanafintohinana ara-nofo". Nipoitra ny toko Niara-niasa tamin'ireo olona nanao fanekena ara-piraisana ara-nofo: Torolalana ho an'ny mpitsabo. Navoakan'i Rout2017 tamin'ny Febroary XNUMX ary azo vidiana Eto. Azonao atao koa ny mamaky a Tantara momba izany.
Dr Darryl Mead, ny filohan'ny The Reward Foundation dia namoaka taratasy momba ny “Ny loza atrehan'ny tanora amin'ny maha mpanjifa pôrnônika azy ”. Navoaka tao Addicta: Ny gazety Tiorka momba ny fiankinan-doha amin'ny farany 2016 ary ny lahatsoratra feno dia afaka maimaim-poana.
Tamin'ny volana aogositra 2016, i Gary Wilson, tompon'andraikitra mpikaroka malaza ao amin'ny The Reward Foundation, dia niara-nanoratra taratasy niaraka tamin'ny dokotera sy mpitsabo aretin-tsaina amerikana miisa 7 izay navoaka tao amin'ny diary "Siansa momba ny fitondran-tena": Mijery Internet ve ny Pornography Internet? Famerenana amin'ny Reports Clinical"Dia azo alaina maimaimpoana amin'ny Siansa momba ny fitondran-tena tranonkala. Izany no malaza indrindra taratasy efa navoaka amin'ny siansa momba ny fitondran-tena.
Nanoratra taratasy manan-danja ihany koa i Gary Wilson momba ny fikarohana amin'ny ho avy eo amin'ny sehatry ny sary vetaveta. Izany dia “Esory ny fampiasana sary vetaveta miteraka Internet hanehoana ny vokany” ary navoaka tao Addicta, Ny gazety Tiorka momba ny fiankinan-doha, ao amin'ny 2016. Ny rohy dia manome fahafahana malalaka amin'ny fianarana feno.